राष्ट्रवादीलाई मनपर्ने भारतीय विक्रम संवत् नयाँ वर्षको शुभकामना – Jheegu
राष्ट्रवादीलाई मनपर्ने भारतीय विक्रम संवत् नयाँ वर्षको शुभकामना
नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ कुन क्यालेण्डर प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि राजनीति हुन्छ । यहाँ आफ्नै देशको क्यालेण्डर प्रयोग गरुँ भन्यो भने साम्प्रदायि भइन्छ अनि भारतमा बनेर भारतमै बिलाएको विक्रम संवत् प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेहरु राष्ट्रवादी कहलाइन्छन् । सोच्न बाध्य हुन्छौं, यी कथित राष्ट्रवादीहरु कुन देशको सरकारको भत्ता खान्छन् होला?
विनाविदेशीको पैसाले एनजिओ चल्दैनन्, कोही हजार ल्याउँछन्, कोही करोड ल्याउँछन् — गाउँ गाउँमा, मन्दिरदेखि चर्पीसम्म एनजिओकै पैसाले बन्न थालेका छन् । उनीहरुलाई बुझाउन त्यही ग्रेगोरियनकै मितिमा पत्राचार गर्छन्, प्रोपोजल लेख्छन्, रिपोर्ट बुझाउँछन् । अनि नौटंकी भने विक्रम संवत्मा गर्छन् ।
पेट्रोल नपाउँदा नि उनीहरु राष्ट्रवादी हुन्छन् यो देशमा, काला छाला भएकाले आफ्नो हक माग्दा नि उनीहरु राष्ट्रवादी हुन्छन् यो देशमा अनि थेप्चो नाक भएकाहरुले आफ्नो पहिचान माग्दा पनि उनीहरु नै राष्ट्रवादी हुन्छ यो देशमा । देशमा सबै राष्ट्रिय भनाउँदा अखबारमा छरपस्टिन्छ राष्ट्रवादको लहर । कसैलाई केही बाँकी राख्दैनन् देशका जागरुक जनता । कोही कोहीका आन्दोलन हेर्दा यस्तो लाग्छ उनीहरु मात्र रहेछन् देशलाई माया गर्ने, अनि बाँकी त सबै देशद्रोही ।
अहिले फेरि ती राष्ट्रवादीहरुलाई देशको माया देखाउने समय आएको छ । अहिले उनीहरुको राष्ट्रवाद देखाउने भनेको उनीहरुको असीम प्रेमको प्रतीक भएको छ विक्रम संवत् । उनीहरु अहिले विक्रम संवत्को नयाँ वर्षलाई नेपालको आफ्नै ढुंगामाटोमा हुर्केको, नेपाली जनताले सिर्जेको जसरी नै माया र सद्भाव देखाउँदैछन् । उनीहरुका लागि यो लालीगुराँस जस्तै नेपाली, काँढेभ्याकुर जस्तै नेपाली अनि सगरमाथा जतिकै नेपाली । उनीहरु कुमारीजात्रामा शंका गर्छन्, उभौली र उधौलीमा शंका गर्छन् तर विक्रम संवत् नेपाली होइन भन्यो कि जाइलाग्छन् । उनीहरुका लागि नेपालसंवत् नेवारहरुको, घाटुनाच गुरुङहरुको, सेब्रु शेर्पाहरुको तर विक्रम संवत् भनेको सबै नेपालीहरुको ।
कसले पढाउँछ यस्तो पाठ यहाँ? भारतीय च्यानलमा दिनरात आउने सोप ओपेरा हेरेर आँखा च्यातिएपछि विक्रम संवत् हामै्र हो भनेर ठोकुवा गर्छन् । महाकाली सन्धी गरेर देशको सार्वभौम रक्षा भएको हो भनेर कुर्लनेहरु नै हुन्छन् वास्तवमा विक्रम संवत्ले नेपालीलाई नेपालका बासिन्दा हुन् भनेर परिचय दिएको दावी गर्ने राष्ट्रवादीहरु ।
अहिले फेरि ती राष्ट्रवादीहरुलाई देशको माया देखाउने समय आएको छ । अहिले उनीहरुको राष्ट्रवाद देखाउने भनेको उनीहरुको असीम प्रेमको प्रतीक भएको छ विक्रम संवत् ।
आखिरमा हामी यही पाउँछौं कि जो क्षेत्र नं ५ टुक्राउन पाइँदैन भन्दै हिड्थे, उनीहरुले हुनआउँछ विक्रम संवत्को वकालात गर्नेहरु पनि । संख्यात्मक रुपमा हेर्दा निकै सानो छ । आफ्नो केही छ भनेर देखाउने पनि खासै छैन उनीहरु । केही छ भने सिपालु छन् । कुराका सिपालु । न उनीहरको कुराले देश विकास गराउँछ, न उद्योग धन्दा बढाउँछ । जहाँ जस्तो कुरा गरेपनि उनीहरु आफ्नो जस्तो धर्म मान्ने, भाषा बोल्ने अनि सिधै भन्दा आफ्नो जस्तो नाक भएकाहरुको मात्रै भलाई खोज्छन् ।
आखिर कसलाई चाहिएको छ यो विक्रम संवत्? धनी होस् वा गरिब, शहर होस् वा गाउँ, मानिसको हात हातमा मोबाइल छ । मोबाइलले सबैलाई ग्रेगोरियन क्यालेण्डर देखाइरहेको छ । अहिले साना ठुला सबैका एकदुइओटा एनजिओ छन् । विनाविदेशीको पैसाले एनजिओ चल्दैनन्, कोही हजार ल्याउँछन्, कोही करोड ल्याउँछन् — गाउँ गाउँमा, मन्दिरदेखि चर्पीसम्म एनजिओकै पैसाले बन्न थालेका छन् । उनीहरुलाई बुझाउन त्यही ग्रेगोरियनकै मितिमा पत्राचार गर्छन्, प्रोपोजल लेख्छन्, रिपोर्ट बुझाउँछन् । अनि नौटंकी भने विक्रम संवत्मा गर्छन् । खाडीमा कमाउन जानेहरु देखि अमेरिकामा मोज गर्नजानेसम्म सबै ग्रेगोरियनले चपाउँछन् । कसैले रेमिट्यान्सको हिसाब यसैमा गर्छन् कसैले इडिभीको रिजल्ट यसैमा पढछन् । तर माया भने विक्रमसंवत्मा । अरु त अरु मन्त्रालयहरु र सरकारी कार्यालयहरु समेत ग्रेगोरियनमा बाँचेकाछन् । कतिन्जेल ढाँट्ने विक्र्म संवत्का सन्तानहरु? को बाँचेको छ ग्रेगोरियन विना? तर पनि ग्रेगोरियनलाई विदेशी ठान्नेहरु विक्रमसंवत्लाई निर्दलीय पञ्चायत जतिकै आफ्नै माटोमा हुर्केको दाबी गर्छन् ।
यो ग्रेगोरियन दुनियाँमा खासै विक्रम संवत्को वकालात गर्ने भनेको उनै हुन् जो ५ नं क्षेत्र टुक्राउन पाइँदैन भनेर कुर्ले, थारुहरुलाई रौं पनि दिन्न भनेर झम्टे, नाक थेप्चोलाई हिमालपारिबाट आएको देखे अनि कालो छालालाई बिहारका सन्तान देखे । तर यथार्थमा घाम जतिकै छर्लङ्ग कुरा के हो भने, जो फलानालाई विदेशी ढिस्कानालाई विदेशी भन्दै हिँड्छन् र आफुमात्रै नेपाली भएको डंका पिट्दै हिँड्छन् उनीहरुका चाहीँ आफु नेपाली हुँ भनेर देखाउने खासै केही हुँदैन । जसको आफ्नो केही हुँदैन उसको कुरो हुन्छ । त्यस समुदायको पनि अहिले यस्तै हाल छ ।
जो कहीँबाट आएका हुन् उनीहरुलाई आफ्नो ठाउँको केही न केही प्यारो हुन्छ । यहाँ आउनेहरुले आफ्नो ठाउँबाट चाकडी, चाप्लुसी, ठगी, धोखा, अन्याय अत्याचार र नश्लवाद बाहेक धर्म, सँस्कति र सभ्यता केही ल्याएन । ल्याएको त्यसबाहेक केही थियो भने यही विक्रम संवत् थियो । यसकैका लागि उनीहरु मरिहत्ते गर्दैछन् ।
दुइचारवटा, त्यो पनि पछि कालान्तरमा सौर्यमासमा परिणत गरिएका केही चाडपर्व बाहेक हाम्रा कुनैपनि साँस्कृतिक, धार्मिक जनजीवनमा यो विदेशी संवत् छाएको छैन । सत्तरी असी वर्षसम्मसँगै राख्यो भने कुकुर त प्यारो हुन्छ, यो भनेको तर हरेक सरकारी कर्मचारीलाई जनताको करकट्टीबाट तलब दिने दिन हो, कसरी प्यारो नहोला । तर न यो हजारौं वर्षसम्म देश र जनताले आफ्नो बनाएको पत्थर पत्थरमा आफ्नो इतिहास लेखेको नेपाल संवत् होे, न आधुनिक जीवनमा नभइ नहुने ग्रेगोरियन हो । यो त बस तिनै आफ्नो केही नभएकाहरुको मात्र आफ्नो हो, उनीहरुलाई नै नयाँ वर्षको शुभकामना ।
← जातीय राज्य लाकि राजधानी प्रदेश?
ऐतिहासिक थिमिया बिस्काः जात्राया चर्चा →